sai nwenya – hoo!haa!!
Taata bụ abalị iri abụọ na ise n’ọnwa mbụ n’afọ 2019. Ihe nke a pụtara bụ na o meela otu ọnwa kpọmkwem ejiri mee emume Ekeresimesi nke afọ gara aga bụ 2018. Elee ya anya n’akụkụ nke ọzọ, ọ fọla naanị ọnwa iri na otu, ka nke 2019 biri ọkụ.Read More →
ENUGWU: LEKWANỤ HEDIMASITA NRỤNYE AKA N’IKE ỤMỤAKA!!!
Aka ndi uwe ojii steeti Enugwu akparala otu onye isi ụlọ akwụkwụ nke aha ya bụ Natanel Idoko, n’ihi na ọ na-emebi ụmụaka ụmụ nwanyị ndi ụlọ akwụkwọ ya. Idoko bụ onye gbara afọ iri ise bụ onye Mkpamteulọ Enugwu Ezike n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Igboeze na steetiRead More →
ỌKWA MMADỤ NWE ỌGỌDỌ EWU NA-ATA? ỤLỌ A GA-ASỤGBUKWA MMADỤ!
Ótù ụlọ oriri na ọñụñụ dị n’Ọka eji Grand Riviera mara na-akwadozị ịda maka nnukwu ike mbuze na-akpa na-akụkụ ya. Ọbụghị sọ ụlọ oriri na ọñụñụ a ka mbuze a na-eyi egwu. Ebe ndi ọzọ gụnyere, ụlọ ikpe ukwu steeti Anambara, nakwa ụlọ ikpe ụkwu ala anyị. Ụlọ ikpe ndiRead More →
ABỊALA HA! NDI NTỌ ATỌỌRỌKWALA ỤKỌCHUKWU ỤKA KATỌLIK ỌZỌKWA!!
Ụkọchukwu ụka Katọlik na-elekọta ụlọ ụka Imanuel, (Emmanuel Catholic hurch) Oviri-Okpe nke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Okpe, na steeti Delta, ka anyị na-anụ na ndi ntọ bu egbe atọrọla ya. Aha ya bụ Rev. Fr. Krisofa Ogaga. Atọọrọ ụkọchukwu a n’ime mgbe aka na-ebe akwa na ụlọ ụka ndiRead More →
DELTA: ỤLỌ ỤKA ADADOLA NDI ỤKA.
Aka na-achị steeti Delta bụ Sịnetọ Ifeanyị Okowa ebeela akwa arịrị maka onye ahụ ụlọ ụka dagburu n’ụlọ ụka ndi Katọlik nke Pọọl dị asọ, n’Ugolo, Adagbrasa nke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Okpe na steeti Delta. Yabụ aka na-achị steeti ahụ kwekwara nkwa na gọọmenti ya ga-akwụ ụgwọ ụlọRead More →
ONYE NNỌCHITE ANYA POOPU ETOOLA UGWUANYỊ
Ọnụ na-ekwuru onye isi ụka Katọlik n’ebo niile nke ụwa, ngalaba nke Naijiria bụ Achịbishọp Antonịọ Guido Filipazzi etoola aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanuị maka ọchịchị ya nke kwesịrị nñomi nakwa ịtụ egwu Chineke ya nke mere na-enwere udo tọrọ atọ na steeti ahụ. Onye nnọchi anya poopuRead More →